Mofon’aina – TALATA 06 MARTSA 2018 – Athis Fanantenana
Fivoriamben’ny mpandray 27 septambra
Sekoly Alahady 27 septambra
Mofon’aina – TALATA 06 MARTSA 2018
6 martsa 2018
1 Ny niandohan’ ny filazantsaran’ i Jesoa Kristy, Zanak’ Andriamanitra.2 Araka izay voasoratra ao amin’ Isaia mpaminany hoe: Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny làlanao;3 Injany! misy feon’ ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny làlan’ i Jehovah. Ataovy mahitsy ny làlan-kalehany,4 dia niseho Jaona, izay nanao batisa tany an-efitra ka nitory ny batisan’ ny fibebahana ho famelan-keloka.5 Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin’ ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany.6 Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva; ary fehin-kibo hoditra no tamin’ ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby.7 Ary nitory izy ka nanao hoe: Avy ao aoriako Ilay mahery noho izaho, ka tsy miendrika hiondrika hamaha ny fehin-kapany aza aho.8 Izaho efa nanao batisa anareo tamin’ ny rano, fa Izy kosa hanao batisa anareo amin’ ny Fanahy Masina.
MARKA 1 :1-8
Manatanteraka izay voalazan’ny mpaminany ny Tompo Jesoa. Jaona mpanao batisa no nialoha Azy mba hitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka, mitarika antsika hanaraka azy izy araka ny hita eto.
1-Manàna finoana hiarahana amin’ny Tompo
Asainy manamboatra ny làlana izay diavintsika isika. Ny anjarantsika dia mandray fanapahankevitra ho tia sy hanompo Azy Azy. Mahalala ny sitrapon’ Andriamanitra, izay efa zatra mandroso amin’ny finoana. Manahaka ireo mpanompo nanara-dia ny Tompo isika rehefa manaiky hiara-miasa Aminy. Jesoa Kristy no mandray antsika sy izay entintsika hanatona Azy. Aoka isika hanana finoana mba hiara-mandeha Aminy.
2-Maneke ny herin’ny Tompo manafaka
Tsy ny rano amin’ny batisa no tokony hatao ho zava-dehibe fa ny herin’ Andriamanitra handraisany antsika ho zanany. Mitafy an’i Kristy ny fiangonana nanomboka tamin’ny batisa ka afaka mitahiry izany mba hamirapiratan’ny tavan’ny Tompo amin’ny endriky ny mino. Resy lahatra no ilazana ny olona manaiky ny herin’ny Tompo manafaka. Fa Izy no niteny hoe: « raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo » (Jao 8.36).
Manana finoana hanekena ny herin’ny batisa ve ianao?